आइपीएलः मनिष पाण्डेको लगातार दोस्रो अर्धशतक - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः मनिष पाण्डेको लगातार दोस्रो अर्धशतक
काठमाडौं, वैशाख १४ । भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत राजस्थान रोयल्स विरुद्धको खेलमा पनि सनराइजर्स हैदरावादका मनिष पाण्डेले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले आज २७ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । ५० रन बनाउँदा मनिषले ८ चौका प्रहार गरे ।
आजको खेलमा हैदरावादले टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको छ । राजस्थान र हैदरावाबीच जारी आइपीएलमा यो दोस्रो खेल हो । पहिलो खेलमा २९ मार्चमा हैदरावादले राजस्थानलाई ५ विकेटले पराजित गरेको थियो । हालसम्म आइपीएलमा यी दुई टिमबीच १० पटक भिडन्त भएको छ । जसमा ६ मा हैदरावाद र ४ खेलमा मात्र राजस्थानले जीत निकालेको छ ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएल खेल्न सन्दीप दिल्ली प्रस्थान, यी हुन् उनका टिमका स्टार खेलाडी
राजस्थानले ४ वर्षयता हैदरावादलाई हराउन सकेको छैन । हैदरावादविरुद्ध राजस्थानले अन्तिम पटक १६ अप्रिल सन् २०१५ मा जीत हासिल गरेको थियो ।
राजस्थानलाई आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । यदि राजस्थान यो खेलमा पराजित भए प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ । यता हैदरावादलाई पनि प्लेअफमा पुग्नुपर्ने चुनौती छ । अंक तालिकामा हैदारावाद १४ अंकका साथ पाँचौ र राजस्थान ८ अंक बटुल्दै सातौं स्थानमा छ ।
याे पनि पढ्नुस टस हारेर दिल्ली डेयडेविल्स व्याटिङ गर्दै, सन्दीप प्लेइङ ११ परे ? को-को परे ?
ट्याग्स: IPL, Manish Pandey, RR Vs SRH